Gudbinta cudurada ka imanaya hooyada ilaa uur jiifta. | Zanzu
Waxaad qaadsiin kartaa uur jiifta haddiiSTI aan la dawayn. Waxay khatar u noqon kartaa uur jiifta haddii STI aan la dawayn. Haddii aad ogtahay inaad qabto STI, la hadal dhakhtarka guud ama ummulisada. Isaga/ iyadda waxa uu kaa caawin karaa tallaabooyinka saxda ah si uu ilaaliyo uur jiifta,
Badanka STI waxaa la dawayn karaa muddada uurka iyaddoonay jirin wax khatar ku ah uur jiifta, laga reebo cagaarshowga B. Xaalada cagaarshowga B, ilmaha waa la tallaali doonaa dhalashada ka dib.
Herbiska ku jira siilka 3 bilood ee u dambaysay ee uurka waxay khatar ku noqon kartaa uur jiifka. La xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka isla markaaba.
Haweenayda uurka leh had iyo jeer waxaa laga baadhaa dhowr STIyada ah. Haddii aad doonayso baadhitaanka STI, waxaad waydiin kartaa ummulisada ama dhakhtarka haweenka.
Haweenayda uurka leh had iyo jeer waxaa laga baadhaa dhowr STIyada ah. Haddii aad rabto in lagaa baadho STI gaar ah, waa inaad waydiisaa dhakhtarka.
Haddii aad qabto HIV, waxaad weli yeelan kartaa carruur caafimaad qabta:
Ilmahu waxa uu wakhtiyada qaarkood ku dhalan doonaa qaliinka uurka. Ilmaha waxa uu sidoo kale u dhalan karaa si dabiici ah haddii dhakhtarku umaleeyo inay badbaado tahay.
Hooyadu ma naas nuujin karto ilmaheeda. Caanaha naasku waxay ka koobanyihiin HIV. Wxaa jira qaabab kale oo la isugu xidho ilmahaaga.
Haweenayda uurka leh ee qabta HIV waa inay qaadataa dawooyin muddada uurka
Ilmahu waxa uu wakhtiyada qaarkood ku dhalan doonaa qaliinka uurka.
Hooyadu ma naas nuujin karto ilmaheeda. Caanaha naasku waxay ka koobanyihiin HIV.
Hooyadu waxay ku quudisaa dhalo ilmaha.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Gudbinta cudurada ka imanaya hooyada ilaa uur jiifta.